Global Campaign dia mandefa tetikasa "Fampianarana momba ny fandriam-pahalemana momba ny fandriam-pahalemana" - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Global Campaign dia mandefa tetikasa "Fampianarana momba ny fandriam-pahalemana"
Oktobra 11, 2021 Vaovao sy hevi-dehibe 0
"Mapping Peace Education", fitaovana fikarohana sy fandraisana andraikitra manerantany manadihady sy manadihady ny ezaka fanabeazana ny fandriam-pahalemana erak'izao tontolo izao, dia natomboka tamin'ny forum virtoaly manokana tamin'ny 9 Oktobra 2021.
Ny hetsika dia natolotr'i Micaela Segal de la Garza, Mpandrindra ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana, ary nanasongadina fifanakalozan-kevitra teo amin'i Tony Jenkins, mpandrindra ny Global Campaign for Peace Education, ary i Cecilia Barbieri, Lehiben'ny seksiona UNESCO momba ny zom-pirenena sy ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana.
Tony sy Cecilia koa dia nanatevin-daharana ny tontolon'ny mpikaroka mpandray anjara manerantany, toa an-dry Loreta Castro (Filipina), Raj Kumar Dhungana (Nepal), Loizos Loukaidis (Sipra), Tatjana Popovic (Serbia), ary Ahmad Jawad Samsor (Afghanistan) .
Mandrosoa horonantsary momba ny hetsika
Momba ny “Fampianarana an-tsarintany ny fandriam-pahalemana”
Ny Mapping Peace Education dia tetik'ady fikarohana eran-tany amin'ny Global Campaign for Peace Education izay natao niaraha-niombon'antoka tamina fikambanana lehibe maromaro nanao fikarohana sy fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana. mitady angona sy fanadihadiana momba ny ezaka fanabeazana fandriam-pahalemana amin'ny fomba ofisialy sy tsy ofisialy any amin'ny firenena manerantany hanohanana ny fampandrosoana ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana mifototra amin'ny porofo mifototra amin'ny porofo hanovana fifandonana, ady ary herisetra. Ity tetikasa ity dia heverina ho loharanom-pahalalana ho an'ny antontan-taratasy any an-toerana sy hamakafaka ny ezaka ho an'ny fandriam-pahalemana. (Ho an'ny antsipiriany fanampiny, vakio eto ny famoahana gazety voalohany.)
Tsidiho ny tranokala tetikasa Mapping Peace Education.
Ny hetsika fandefasana
Micaela Segal de la Garza dia mpanabe amin'ny fiteny maro izay mifantoka amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana sy ny fifandraisana. Mica dia mampianatra ny teny espaniola amin'ny lisea ho an'ny daholobe any Houston ary mpanolotsaina mpampianatra ho an'ny mpiasa sy ny famoahana ny boky tantanin'ny mpianatra. Ny efitrano fianarana hafa dia misy ny any ivelany izay ampianariny ny ankizy amin'ny ivon-toerana voajanahary eo an-toerana, ary ny efitrano fianarana manerantany izay mandrindra ny tetikasa miaraka amin'ny Global Campaign for Peace Education. Izy dia olona iray nandalina ny Masters in International Peace, Conflict, and Development Studies ao amin'ny Universitat Jaume I any Spain, ary manohy mianatra miaraka amin'ny International Institute on Peace Education.
Mpandray anjara amin'ny dinika
Cecilia Barbieri nanatevin-daharana ny sehatry ny fanabeazam-pirenena momba ny zom-pirenena sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny UNESCO tamin'ny volana septambra 2019, avy amin'ny Birao Regional UNESCO ho an'ny fanabeazana any Amerika Latina sy Karaiba any Santiago, Chile, izay niandraiketany ny Sekolin'ny Fampianarana 2030. Talohan'ny nidirany tao amin'ny UNESCO Santiago dia niasa ho manam-pahaizana momba ny fanabeazana miaraka amin'ny UNESCO izy nanomboka ny taona 1999, indrindra fa ny atsy Afrika sy Azia. Talohan'ny nidirany tao amin'ny fikambanana dia niasa tamin'ny sehatry ny fiofanana ara-teknika sy asa ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny andrim-panjakana izy, ary efa an-taonany maro no nilatsaka tamin'ny kolontsain'ny fandriampahalemana, ny zon'olombelona ary ny fanabeazana eo amin'ny samy kolontsaina. Mpianatra siansa ara-tsosialy nahazo diplaoma avy amin'ny University of Bologna, Italia, nanohy ny fanabeazana tamin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olona, ​​psikolojia fanabeazana ary politika sy fanabeazana momba ny fanabeazana izy.
Tony Jenkins PhD manana traikefa 20+ taona mitarika, mamolavola ary manamora ny fandriam-pahalemana sy ny programa fanabeazana iraisam-pirenena ary tetikasa eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana iraisam-pirenena, fandalinana fandriam-pahalemana ary fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana. Tony dia talen'ny fitantanana ny International Institute on Peace Education (IIPE) ary mpandrindra ny Global Campaign for Peace Education (GCPE). Mpampianatra ao amin'ny Program on Justice and Peace Studies ao amin'ny Georgetown University ihany koa izy ankehitriny. Ny fikarohana nataon'i Tony dia mifantoka amin'ny fandinihana ny fiatraikany sy ny fahombiazan'ny fomba fanabeazana ny fandriam-pahalemana sy ny pedagogies amin'ny fikolokoloana ny fanovana sy fanovana manokana, sosialy ary politika.
Mpikaroka mpandray anjara
Loreta Castro, Ed. D. dia raisina ho iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana any Filipina, nanomboka ny ezaka nataony tamin'ny fametrahana ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 1980. Dr. Castro no filoha teo aloha tao amin'ny College Miriam ary teo ambanin'ny fe-potoam-piasany no nametrahana ny fototry ny Centre for Peace Education (CPE), sampana fandriam-pahalemana ao an-tsekoly.
Raj Kumar Dhungana dia manampahaizana momba ny fandriam-pahalemana sy ny fitantanana avy any Nepal. Manana traikefa efa ela tamin'ny fampianarana izy, ny fampidirana ny fampianarana fandriam-pahalemana amin'ny rafi-panabeazam-pirenena ary ny fampiroboroboana ny fitantanana tsara. Niasa an-tsekoly izy, ny governemantan'i Nepal, Save the Children, UNESCO, UNICEF, Tribhuvan University, Department of Conflict, Peace and Development, UN Office of the Disarmament Affairs, and UNDP in Nepal, South Asia and the Asia Pacific Region, ary University of Kathmandu, Sekolin'ny Fanabeazana. Izy dia Co-Convener an'ny IPRA tamin'ny 2016-2018. Nahavita ny PhD-ny tamin'ny taona 2018 tao amin'ny University of Kathmandu izay misahana manokana ny herisetra an-tsekoly. Amin'izao fotoana izao dia miasa ao amin'ny masoivoho Royal Norveziana any Kathmandu izy amin'ny maha mpanolotsaina zokiolona azy, mifandray amin'ny Oniversiten'i Kathmandu amin'ny maha mpampianatra azy mitsidika, ary manao asa an-tsitrapo ho mpikambana manam-pahaizana ao amin'ny Governemanta Nasionalin'ny zon'olombelona momba ny zon'ny ankizy ao Nepal.
Loizos Loukaidis dia talen'ny Fikambanana ho an'ny fifanakalozan-kevitra ara-tantara sy ny fikarohana (AHDR). Manana BA amin'ny fanabeazana fototra (Aristotle University, Greece) ary MA amin'ny Peace Education (UPEACE, Costa Rica) izy ary manana traikefa lehibe amin'ny sehatry ny fanabeazana, na mpampianatra amin'ny Sekolim-pianakaviana na mpikatroka fanabeazana ho an'ny fandriampahalemana, mpandrindra ny tetik'asa ary mpikaroka . Tamin'ny taona 2016, i Loizos dia notendren'ny filohan'ny Repoblikan'i Sipra ho mpikambana ao amin'ny Komity Teknika Bi-kaominaly momba ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fifampiraharahana momba ny fandriam-pahalemana. Izy koa dia mpandrindra ny Tetikasa 'Imagina' izay mampivondrona ny mpianatra sy ny mpampianatra avy any an-tsekoly any Sipra mandritra ny fotoam-pianarana.
Tatjana Popovic dia talen'ny Nansen Dialogue Center Serbia ary mpanazatra efa za-draharaha ao anatin'ny sehatry ny fanovana fifandonana. Nandritra izay 20 taona lasa izay dia nanamora seminera fifanakalozan-kevitra iraisan'ny foko ho an'ny mpampianatra, minisiteran'ny fanabeazam-pirenena ary ny solontenan'ny tompon'andraikitra ao an-toerana any Balkans Andrefana izy, izay nandray anjara tamin'ny fampihavanana. Ny fifantohana amin'ny fampiofanana azy dia ny Dialog, ny Metodôlika amin'ny fampianarana mifampitohy, ny fitaovana fandinihana fifanoherana ary ny fanelanelanana. Tatjana dia mitazona MA amin'ny fandinihana fandriam-pahalemana avy amin'ny Faculty of Science Politika, University of Belgrade ary mpanelanelana voamarina.
Ahmad Jawad Samsor dia Talen'ny Fandaharam-pampianarana momba ny fandriam-pahalemana an'ny United States Institute of Peace (USIP) any Kabul, Afghanistan. Mpampianatra ao amin'ny University American Afghanistan (AUAF) ihany koa izy.
Fikarohana # fampianarana
# Sarintany fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana
Fampianarana tantara sy fampihavanana amin'ny fiarahamonina miady (post)
Fampihavanana sy fanabeazana any Bosnia sy Herzegovina: Avy amin'ny fisarahana ka hatramin'ny fandriampahalemana maharitra
March 22, 2018 Fampitaham-baovao 1
Ity boky vaovao nosoratan'i Eleonora Emkic ity dia miresaka momba ny fanontaniana momba ny fikarohana momba ny fanamby natrehin'i Bosnia sy Herzegovina efa ho amin'ny fiovan'ny fandriam-pahalemana; momba ny fifandraisana misy eo amin'ny rafi-pampianarana ankehitriny sy ny fampandrosoana ny fandriampahalemana maharitra; ary koa mamaly ny fomba hahatratrarana ny fandriam-pahalemana miorina amin'ny fanabeazana ny fandriampahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Olana manokana an'ny Gazety Azia momba ny fandriam-pahalemana: Manova ny herisetra amin'ny fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fanabeazana
Jona 16, 2018 Fampitaham-baovao, Research 0
Ny laharana Mey 2018 an'ny The Asian Journal of Peacebuilding (Vol. 6 No. 1) dia nandinika ny lohahevitra hoe "Manova ny herisetra amin'ny fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fanabeazana." [tohizo ny famakiana…]
IRC dia mitady talen'ny programa - Fikarohana momba ny fanabeazam-pirenena amin'ny krizy lavareny
Desambra 23, 2019 Jobs 0
Ny tanjon'ity fifanarahana ity dia ny hanomezana sy hanamafisana ny fandraisana porofo amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny famoahana ny fanabeazana ao anatin'ny fifanolanana sy ny krizy lavareny. Fe-potoana fampiharana: 31 Desambra. [tohizo ny famakiana…]